War for the Planet of the Apes (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
မွောကျပိုငျးကစဈတပျရောကျလာပွီး ဆီဇာတို့ အဖှဲ့ကို တောထဲမှာ လိုကျရှာကွီး ခမြှေုနျးကွပါတော့တယျ။ အပုနျးကောငျးတဲ့ ဆီဇာကွောငျ့ စဈတပျကဘယျလိုမှ ဆီဇာတို့နရောကို ရှာလို့မတှကွေ့ပါဘူး။
တဈနကွေ့တော့ ဆီဇာရဲ့မိနျးမနဲ့ ကလေးနဲ့အသတျခံရအပွီးမှာတော့ ဆီဇာတဈယောကျ လကျစားခခြေငျြစိတျအပွညျ့နဲ့ သူ့မိသားစုကို နရောသဈကိုသှားခိုငျးလိုကျပွီး လကျစားခဖြေို့ လူသားတှဆေီကိုပွနျအသှားမှာတော့….
ဒီကားကတော့ Planet of the Apes Reboot Film Series ရဲ့ လကျရှိမှာ နောကျဆုံးကားပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီကားကတော့ IMDb မှာ 7.4 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 94% တောငျရထားတဲ့ ကားကောငျးလေးဖွဈလို့ ကြှနျတျောတောငျ ကွညျ့နရေငျးနဲ့ပဲ ဘာဆကျဖွဈမလဲဆိုပွီး မစောငျ့နိုငျလို့ကြျောကြျောကွညျ့ခဲ့ရတယျ။ ဇာတျလမျးက အတှဲလိုကျဆိုတော့ ဇာတျလမျးအကွောငျး သိပျမပွောတော့ဘူး Spoil သလို ဖွဈမှာစိုးတဲ့အတှကျ ကိုယျတိုငျပဲ ကွညျ့ရှုပေးကွပါ။
မြောက်ပိုင်းကစစ်တပ်ရောက်လာပြီး ဆီဇာတို့ အဖွဲ့ကို တောထဲမှာ လိုက်ရှာကြီး ချေမှုန်းကြပါတော့တယ်။ အပုန်းကောင်းတဲ့ ဆီဇာကြောင့် စစ်တပ်ကဘယ်လိုမှ ဆီဇာတို့နေရာကို ရှာလို့မတွေ့ကြပါဘူး။
တစ်နေ့ကြတော့ ဆီဇာရဲ့မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့အသတ်ခံရအပြီးမှာတော့ ဆီဇာတစ်ယောက် လက်စားချေချင်စိတ်အပြည့်နဲ့ သူ့မိသားစုကို နေရာသစ်ကိုသွားခိုင်းလိုက်ပြီး လက်စားချေဖို့ လူသားတွေဆီကိုပြန်အသွားမှာတော့….
ဒီကားကတော့ Planet of the Apes Reboot Film Series ရဲ့ လက်ရှိမှာ နောက်ဆုံးကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကတော့ IMDb မှာ 7.4 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 94% တောင်ရထားတဲ့ ကားကောင်းလေးဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တောင် ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီး မစောင့်နိုင်လို့ကျော်ကျော်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ ဇာတ်လမ်းက အတွဲလိုက်ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းအကြောင်း သိပ်မပြောတော့ဘူး Spoil သလို ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်ရှုပေးကြပါ။
Option 1 server.mfile.cloud 657 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 657 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 657 MB SD (480p)